Taliye laga celiyey goobtii ay joogeen askartii uu hogaamin lahaa - BBC News Somali
Taliye laga celiyey goobtii ay joogeen askartii uu hogaamin lahaa
Garoonka dayaaradaha ee Kismaayo
Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay garoonka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in garoonka ay ka celiyeen wafti uu hoggaaminayo taliye cusub oo loo soo magacaabay ciidamada xerada 43-aad ee federaalka ee qaabilsan gobolada jubbooyinka.
Arrintan ayaa sida muuqata muujinaysa wada shaqayn xumada u dhaxaysa maamullada Federaalaka iyo dawladda dhexe.
Taliyahan cusub ayaa lagu magacaabaa Jeneraal Cali Maxamed Maxamuud (Bogmadow) sida lagu daabacay bogga rasmiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Jeneraal Bagmadoow oo horey uga tirsanaan jirey ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, balse sanadihii dambe qurbaha ku maqnaa ayaa darajada jananimada loo dalacsiiyay bishii hore.
Abaaraha: 26 qof oo ku dhintay deegaanno ka tirsan Jubbaland
Jubbaland: Xaasaska Shabaab waa in ay isaga baxaan Kismayo
Kooxaha ay cayaarta dhex martay
Sida ku cad qoraalka kusoo baxay bogga Jubbaland, soo magacaabista taliyaha ayaanan waafaqsanayn sida uu nidaamka ahaa, waxaana la yiri "Dowladda federaalka oo iska indha tireysa heshiiska hab dhismeedka Amniga ee lagu galey 11-May-2017 magaalada London ee dalka Ingriiska , heshiiskaas qodobkiisa 20aad ayaa qeexaya habka loo marayo soo magacaabidda taliyaha qeybta ee ciidamada ku sugan deegaanada Dowlad goboleedyada, qodobka ayaa sheegaya in Dowladda federaalku kaliya kusoo magacaabi karto taliyaha qeybta kadib markii ay latashi kala sameyso madaxweyna Dowlad goboleedka deegaankaas iskuna waafaqaan qofka lasoo magacaabayo".
Jeneraal Cali Maxamed Maxamuud (Bogmadow)
Qoraalka ayaa waxaa intaas lagu sii daray "Dowladda federaalku maysan wax talo ah ka weydiinin Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam magacaabida taliyaha cusub ee qeybta 43aad ee XDS ee ku sugan Kismaayo , taas oo ugu danbeyn buuq keentey sababteyna in saaka diyaaraduu xamar kaga yimid lagu celiyo taliyihii loo soo magacaabey qeybga 43aad ee XDS Gen .Cali Bogamdow".
Waxaa shirkaad ku wada casuuman madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo uu ka midyahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.